Iyo inotevera vhezheni yeCinnamon inokurumidza kupfuura zvakajairwa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Linux Mint projekiti ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anozivikanwa eGnu / Linux mapurojekiti kwete chete kune ayo Ubuntu base kana huzivi asiwo nezvirongwa uye maturusi aakagadzira. Sinamoni yake tafura ndeimwe yacho. Its minimalism uye fanano kune yepamhepo mashandiro masisitimu yaita kuti Cinnamon isvike kune dzimwe Gnu / Linux migove uye inogona kunakidzwa nevashandisi vasingashandisi Linux Mint
Asi kunyangwe ichizivikanwa, Sinamoni haina hutano hwakanaka uye iri kunonoka uye kunonoka. Iwo mabhenji echangoburwa anoratidza kuti Cinnamon inotora kanosvika katanhatu pakureba kupfuura metacity, Gnome's windows maneja. Kuve nguva dzisina kukodzera kune vazhinji vashandisi.
Zvisinei, izvi zvinoita kunge zviri kugadziriswa zvishoma nezvishoma. Clem Lefebvre achangobva kuzivisa izvozvo Iyo Cinnamon kodhi yakagamuchira zvimwe zvidiki diki kuyedza kugadzirisa aya matambudziko ekurodha uye (kwenguva) zvinoshanda nemazvo.
Asi kunyangwe Cinnamon ichivandudza iyo kurodha kumhanya, iyo Cinnamon yekumhanyisa dambudziko ichiripo uye icharamba ichireba sekureba iwe uchigovana maraibhurari uye mapakeji neGnome. Dambudziko kubva kune akawanda madhesiki ari kutsemurwa uye zvishoma nezvishoma vamwe vari kuigadzirisa. Shanduko itsva yeCinnamon ichaonekwa mune inotevera vhezheni yeLinux Mint asiwo mukugovera kwedu kana tikashandisa nzira dzekuvandudza kuisa yazvino vhezheni yeCinnamon, chimwe chinhu chisina kukurudzirwa asi chinogoneka. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Izvi zvichatibvumidza isu kuve neyazvino vhezheni yesinamoni, chero bedzi patiri kushandisa kugoverwa kwakavakirwa paDebian, nekuti iro repository nderayo. Kana isu tinogona zvakare kusarudza chaiwo muchina uye kuisirwa Ubuntu neiyi repository, chimwe chinhu chakanakira kana isu tisingade kuona yedu yezuva nezuva basa rakarasika. Chero zvazvingaitika, zvinoita sekunge Linux Mint 19 uye Cinnamon zvichine kushamisika kutipa Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Iyo inotevera vhezheni yeCinnamon ichakurumidza kupfuura zvakajairwa
Sei uchienzanisa sinamoni ne metacity? Izvo zvinhu zvakasiyana, iwe unoreva kugunun'una neuchenjeri
Chinyorwa chakanaka, asi metacity haisisiri Gnome's windows maneja, sezvo nhevedzano 3 gnome inoshandisa Mutter.
Ini ndinoda Cinnamon, chero kunatsiridzwa kuchazokosheswa. Uye zvakare, zvinofungidzirwa kuti kuvandudzwa kunouya imwe neimwe, kana paine shanduko zhinji panguva imwe chete, ivo vanofambidzana nezvakawanda zvikanganiso.